Ka tirtir jadwalka ka imanaya Databaseyaasha - Tilmaam Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Access Repair Ka tirtir miisaska ka soo baxa macluumaadka
Ka tirtir miisaska ka soo baxa macluumaadka
Markaad tirtirto miisaska qaar ka mid ah keydka macluumaadka Microsoft Access (.mdb ama .accdb) si qalad ah oo aad rabto inaad soo kabsato, waad isticmaali kartaa DataNumen Access Repair si loo baaro feylasha .mdb ama .accdb lagana soo ceshado miisaska la tirtiray ee feylasha intii suurogal ah.
Fiiro gaar ah: Ka hor intaadan ka soo kaban miisaska tirtiray Access mdb ama file accdb leh DataNumen Access Repair, fadlan xir Microsoft Access iyo wixii kale ee codsiyo ah ee wax ka beddeli kara faylka mdb ama accdb.
Dhagsii tabka “Options”, oo hubi "Soo kabso miisaska la tirtiray" doorasho ayaa la hubiyaa.
Xullo Access mdb ama faylka accdb si loo hagaajiyo:
Waxaad si toos ah u galin kartaa mdb ama accdb filename-ka ama waxaad gujin kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato feylka.
Marka la eego, DataNumen Access Repair kaydin doonta keydka keydka xogta ee go'an fayl cusub oo lagu magacaabo xxxx_fixed.mdb ama xxxx_fixed.accdb, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha mdb ama faylka accdb. Tusaale ahaan, faylka Damaged.mdb, magaca asalka ah ee faylka go'an wuxuu noqonayaa Damaged_fixed.mdb. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Click ah batoonka, iyo DataNumen Access Repair doonaa start iskaanka iyo ka soo kabashada miisaska la tirtiray ee laga helay isha mdb ama accdb. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii qaar ka mid ah miisaska ku jira isha mdb ama keydka xogta laga heli karo si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hada waxaad kufuri kartaa mdb ama accdb keydka macluumaadka Microsoft Access ama codsiyada kale waxaadna hubin kartaa in miisaska la tirtiray si guul leh loo soo kabsaday.
Fiiro gaar ah: Nooca demo wuxuu soo bandhigi doonaa sanduuqa fariinta soo socda si uu u muujiyo guusha soo kabashada:
meesha aad ka riixi karto badhanka si aad u aragto warbixin faahfaahsan oo ku saabsan miisaska oo dhan, beeraha, miisaska, cilaaqaadka iyo walxaha kale ee la soo helay, sida tan:
Laakiin nooca demo ma soo saari doono feylka go'an. Fadlan dalbo nooca oo buuxa si aad u hesho feylka go'an.